तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ : पाँच सय वर्षअघि गा’ डिएको श’वबाट अहिले पनि बग्छ र' गत ! - Supportive Nepal
तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ : पाँच सय वर्षअघि गा’ डिएको श’वबाट अहिले पनि बग्छ र’ गत !
October 15, 2020 October 15, 2020 News NepalLeaveaComment on तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ : पाँच सय वर्षअघि गा’ डिएको श’वबाट अहिले पनि बग्छ र’ गत !
पाँच सय वर्ष पहिले निधन भएको कुनै मान्छेको शरीरबाट अहिले पनि रगत आँउछ भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तपाईँले यसलाई अपत्यारिलो कुरा या हावादारी कुरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।
तर, अर्जेन्टिनामा एउटा त्यस्तै घटना भएको छ । जुन सुन्नासाथ जोकोहीले पत्याउनै सक्दैनन् । सन् १९९९ मा वैज्ञानिकको टोलीले अर्जेन्टिनामा ज्वालामुखीले १५ वर्षकी एक युवतीका श व फेला परेको थियो ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यसभन्दाअघि कुनै पनि मृ त शरीरमा यस किसिमका ब्याक्टेरिया भेटिएका थिएनन् । ती किशोरीको शरीर सयौँ सालौँपछि पनि यति राम्रो अवस्थामा भेटिएको छ । उनको कपालसम्म पनि नझरेको अवस्थामा भेटिएको छ ।
यी किशोरीको शरीरले कयौँ रहस्य खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिकितस्कहरुले अहिले ती किशोरीको टिबीका ब्याक्टेरिया रहेको रगतको जाँच गरिरहेका छन् । जसबाट चिकित्सकहरुले कयौँ रोगको उपचार विधि पनि पत्ता लाग्ने आशा गरेका छन् ।
आफ्नो मृ’ त्यु हुने समय थाहा पाएपछि यी युवतीले गरिन यस्तो तयारी, सुन्दा सबै चकित भए !